IINDIDI ZECACTUS YANGAPHAKATHI (ISIKHOKELO SENDLU) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Iindidi zeCactus yangaphakathi (Isikhokelo seNdlu)
Wamkelekile kwigalari yethu yeentlobo zecactus yangaphakathi kubandakanya nezona ndlu zingcono zokukhetha, iintlobo ezincinci kunye neengcebiso zokhathalelo. I-cactus yangaphakathi inokuba sisityalo esifanelekileyo. Ukuhamba phambili ngoku nangonaphakade zezona zilula, kwaye kulula izityalo zononophelo: cacti. I-intanethi ilayishwe yimifanekiso ye-cacti kwizikhongozeli ezintle ezimile okweekati kunye namapayina, zityalwe kumalungiselelo, zaze zahonjiswa nangeeholide.
Ukuba kulula kakhulu, kutheni kungabikho wonke umntu one-cactus? Impendulo ihlala ngenxa yolwazi oluchanekileyo oluchanekileyo kukhathalelo kunye neendidi ze-cacti. Ngaphandle kokuqhubeka, makhe sithethe ngezinye zeentlobo zecactus yangaphakathi.
Iindidi ezahlukeneyo zeCactus yangaphakathi
Iindidi zeCactus Houseplants
Iprickly Pear Cactus
Izityalo eziqhelekileyo zeCactus
Iindlebe zeBunny Cactus
IGold Barrel Cactus
Ibhodi yokuhlamba yeFairy (Haworthia)
Uthuli lweRose Echeveria
Iindidi zeCactus ezincinci kunye neentlobo ezincinci zeCactus
Q & A yangaphakathi yeCacti
Zeziphi ezona Ndidi ziCacti zokuKhula ngaphakathi?
Yeyiphi eyona Cactus ilula ukuba ikhule?
Ngaba iCacti iyawucoca umoya?
Ndifanele ndiyibeke phi indawo yam yangaphakathi yeCactus?
Ukujonga amawaka eentlobo ze-cacti kunye nee-succulents, kungathatha ixesha elide kakhulu ukudwelisa nganye nganye, ke kungcono ukuba uzinciphise zibe ziindidi ezahlukeneyo.
Ngaphakathi kwezi ndidi kukho iintlobo ezahlukeneyo ezahlukileyo, ke ukwazi ukuba zeziphi iintlobo ze-cacti ezinxulumene noku kunokukunceda uthathe isigqibo sokuba zeziphi oza kuzongeza kwingqokelela yakho elandelayo.
Ukuba ukhe uzibuze malunga nezo ntyatyambo zintle ziqhakaza umthi, ezi zezinye ezineentyatyambo ezimibalabala ezixhonywe kwizikhondo ezide.
I-Orchid cacti ziyi-epiphytic, okuthetha ukuba zikhula kakhulu emoyeni ziqhotyoshelwe kwezinye izityalo, kodwa zinokukhuliswa kwimeko efanelekileyo yomhlaba, ukuba nje zifumana ukukhanya okuninzi kunye nokuphosa rhoqo. Ngelixa ikhula kancinci, intlawulo yeentyatyambo kufanelekile ukuba uyilinde.
Owu, iibhola ezimfutshane, ezinamabala amnandi ezivela kuzo zonke iivenkile ngeenyanga zehlobo! Nangona zigcinwa ngokubanzi njengezityalo ezincinci zangaphakathi, i-barrel cacti, kubandakanya i-saguaro cactus, inyuka ikhulu kakhulu kwindawo zabo zokuhlala.
Zigcine wonwabile ixesha elide ngokwaneleyo, kwaye uyakuba nebhola enkulu kakhulu, ene-spiky, ne-oblong ibhola entle. Ezi cacti zihlala zifuna ilanga elininzi njengoko unokubonelela, kodwa ukukhanya kwezibane kunokunceda ukukhawulezisa inkqubo yokukhula. Abanye bade badubule!
(Qaphela isilwanyana esinetyhefu) Ngokubanzi kuthwelwe ngemibala ethandekayo yamagqabi okanye iintyatyambo, i-euphorbia ziintlobo ezahlukeneyo zecacti eneentlobo ngeentlobo.
Umthi wobisi othandwayo wase-Afrika, kunye nesithsaba sameva, yimizekelo yeentlobo ze-euphorbia, zombini zinencindi yobisi yodidi enamathele kakhulu kwaye inokuba yityhefu, kuxhomekeke kudidi.
Nangona kunjalo, ukuba igcinwe kude kufikeleleke ebantwaneni nakwizilwanyana zasekhaya, i-euphorbias inesibheno esininzi sokubonisa, kwaye ayisiyongxaki kakhulu. Jonga eli nqaku malunga nokunye Izindlu zendlu ezikhuselekileyo kwiikati .
Ku- $ 3- $ 5 pop kwindawo yokoqobo kuzo zonke iivenkile ezinkulu zebhokisi, ezi zezona ndawo zaziwayo nezisasazekayo ze-cactus. Iisucculents zisetyenziselwa yonke into: iiofisi, iikhitshi, izipho, uyiqamba igama.
Mhlawumbi enye yezona zinto zininzi ze-cactus, ii-succulents ziza phantse kuwo wonke umbala, imilo, kunye nepateni yokukhula, nangona uninzi lukhula kwipateni entle yeerosette. Phantse akunakwenzeka ukubulala, ii-succulents azithandi manzi maninzi, kodwa zifuna ukukhanya okuninzi.
diy gcina iposikhadi yomhla
Iisucculents zomdiliya ngokubanzi azibaqali. Nokuba zezona zityalo zinamava abantu behlabathi bayasokola ngentambo-yeeperile kunye nomsila we-burro, kodwa ungakuvumeli oku kukudimaze.
Naluphi na uhlobo lwesucculent kumtya luya kufuna ngaphezulu kweeyure ezintandathu zelanga ngokuthe ngqo yonke imihla, kodwa akufuneki manzi maninzi njengalo naluphi na uhlobo lwe-cactus. Kungcono ukuvumela umhlaba wome ngokupheleleyo ngaphambi kokuphinda ungene kwakhona, njengoko oku kukhuthaza iingcambu zezi zityalo ukuba zisasazeke ngakumbi.
Uninzi lweenjongo kunye neenjongo, iisucculents zihlala zikhetha ukhetho kwizindlu, njengoko zinokunyamezela ukungonwabi okuninzi kwaye zingakukhathaleli ukunkcenkceshela okungaphaya.
Nokuba kungcono malunga ne-succulents kukuba kulula kakhulu ukusasaza, ke unokwakha igadi enencasa kunye nezityalo ezimbalwa okanye wabelane nothando lwe-cactus nabahlobo kunye nosapho. Apha ngezantsi kukho iintlobo ezimbalwa ze-cacti ezihlala zibonwa njengezityalo zendlu.
Kusenokwenzeka ukuba ukhe wayibona inyanga ye-cactus ngaphambili ebomini bakho, ngakumbi ukuba ukhe waya kwivenkile yokuphucula ikhaya okanye indawo yokugcina izilwanyana.
umtshato kumnqophiso omdala
Ukuba ujonge ukuthenga enye, jonga emazantsi esiqu apho udibana khona nomhlaba ukuqinisekisa ukuba akukho kubola, kwaye qiniseka ukubaphepha abo baneentyatyambo zobuxoki ezinamathele ngaphezulu. Nangona bebahle, aba bafana bancinci bahlala bephathwa kakubi xa kuthengiswa ngamanani amaninzi.
Inkangeleko entle ye-rosette ye-echeveria yenza eyona ndawo iphambili kwigumbi elikhanyisiweyo. Ngokuqhelekileyo kufunyanwa ezivenkileni, i-echeveria yenye yeendidi ezincinci ezinetoni yokhetho lombala, kwaye zonke zifuna ukhathalelo olufanayo: ukukhanya okuninzi, amanzi amancinci.
Ezi zityalwe kakuhle kumagumbi ashushu endlwini yakho, nangona kunjalo, njengoko amaqondo obushushu abandayo ethintela ukukhula okutsha.
Ukusuka kwiindidi ezahluka-hlukeneyo ukuya kwimitya-yeebhanana, kukho iindidi zale nto inencasa ekufaneleyo. Nangona zintsonkothile, iiperile zentwasahlobo kunye nabadibani nazo zihlala zityalwa kwiibhaskithi ezijingayo.
Nangona kunjalo, lumka: kulula ukulibala ukunkcenkceshela ibhaskiti ejingayo yee-succulents, kwaye kunokuba nzima ukubabuyisa kwimbalela embi. Olu luhlobo olukhulu onokuluhamba ukuba ubenako konke okunye!
Zonke iofisi zinenye yezi, ndawo ndawo. Iintyatyambo ezintle zesilky ziyawa ukusuka ekuhlwayeleni amagqabi aluhlaza, enzele eyona ndawo intle yokutyala indlu yecactus ubukumkani besityalo ekufuneka bunikezele, ngaphandle kweentlobo ekunzima ukuzifumana.
Kuthengiswa ngokusisiseko naphina apho ungathenga khona umhlaba kunye nokutyala, iKrisimesi cacti yenza izindlu ezimnandi kwaye iya kunyamezela nantoni na oyenzayo kubo (phantse).
La matye anqabileyo amancinci aqala kobukhulu obukhulu ukuya kubuncinci bobukhulu, kwaye phantse zonke zikhangeleka ngathi ziindlebe zomvundla ngaxa lithile ebomini babo, yiyo loo nto kusoloko kusithiwa zii-cactus zeendlebe zomvundla.
Ezinye iindidi zinamaqoqo athambileyo eenaliti, ngelixa ezinye zinamaqhakuva amade, abukhali athi ngandlela zonke aqhubeke nokukufumana ngexesha lenkqubo yokubuyisela. Nangona kunjalo, ezi zezinye zezona cacti zithembekileyo zokukhula ngaphakathi.
Iindidi ze-cacti onokuzikhulisa ngaphakathi ngaphakathi zingenasiphelo, kodwa zininzi ezifumaneka ngokufuthi kwiindawo ezihlala ekhaya. Ezinye zezi ntlobo zinokufumaneka naphi na, kodwa zimbalwa ezinokukhohlisa ukubamba.
Gcina ukhumbula ukuba ngelixa izithintelo zengingqi zithetha ukuba ezinye iintlobo azizukukhula kwiindawo ezithile zaseMntla Melika, nditsho nangaphakathi, uninzi luguquke kakhulu kwaye luyanyamezelana.
Incinci, intle, kwaye kulula ukuyinyamekela, iindlebe ze-bunny ze-cactus ziintlobo ezikhula ngokwamacandelo, ukongeza ukukhula okutsha kwiincopho esele zikho.
Ezi cacti zifuna amanzi amancinci, kwaye ziya kutyatyamba ekuphakameni kwehlobo kwiindawo ezininzi zemozulu ukuba zivunyelwe ukuba zome phakathi kokunkcenkceshela!
Phakathi kobunzulu obuluhlaza kunye negolide yegolide yale cactus ngumahluko omangalisayo owenza ukuba ibe sisipho sendlu esiqhelekileyo.
Le cactus imfutshane, irhangqi, kwaye igutyungelwe ziipikhi ezintle ezifana neeliti zokuthunga, kodwa ungakhathazeki; Ukufakelwa kwakhona kulula njengokubeka iiglavu!
Iindidi eziqhelekileyo ze-haworthia zibandakanya isityalo esikwifestile yefestile, iingcebiso ezimnandi zamagqabi agqithisileyo, kunye ne-zebra haworthia, enemigca emhlophe kumagqabi aluhlaza amile okwe-aloe.
I-Haworthia iza neendidi ezininzi kwaye kulula kakhulu ukuyinyamekela, ibenza ukuba ibe yenye yezona ndawo zixhaphakileyo kumakhaya okwangoku.
Enye yezona zintandokazi zePinterest, i-rose echeveria enothuli ibukeka ngokuchanekileyo njengoko ivakalayo, kunye ne-rosette egqibeleleyo yamagqabi anemibala e-rose egxotha amanzi (emnandi kakhulu ukubukela!).
umnyango wegaraji eblue
Unonophelo olulula kwaye ngokubanzi kulula ukusasaza, oku kumnandi kutsala ukujonga kunye nothando kulo lonke uhlobo lomqokeleli wezityalo.
Nangona ezi ntlobo ze-cactus zezinye zezona zixhaphakileyo kumakhaya namhlanje, iindlela ezihlala zitshintsha zinika ubungqina bokunyuka okukhulu kwintengiso yeentlobo ngeentlobo ze-cacti minyaka le. Kukho rhoqo ezinye iintlobo ezintsha kunye nezindala eziza kubalasela. Gcina ujonge iintlobo ezizodwa kwiivenkile ezikhusela izityalo zazo!
Ukuba i-saguaro cactus ekhule ngokupheleleyo ayizukulingana nendawo yakho, zininzi ezinye iindlela onokukhetha kuzo. Isenokuba lixesha lokujonga indlela encinci ye-cactus ukuze ngelixa ungenako ukuxhoma umnqwazi kwi-cactus yakho, usenokonwabela ubuhle beentyatyambo zasentlango ukusuka kwinduduzo yesingqengqelo sakho.
Nazi iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo ukugcina i-cacti ikuvumela ukuba unqunyelwe kwisithuba.
Xa i-cactus idibana ne-starfish, inkwenkwezi ye-cactus iyavela, inamagqabi amahlanu kuphela alinganayo kunye neentyatyambo ezintle phantse kuwo nawuphi na umbala onokucinga ngawo embindini.
I-Star cacti ifuna ingqwalaselo encinci, efuna ukunkcenkceshela ngamanye amaxesha; zizakuqala ukucaba kwaye zibemdaka xa zingaphantsi kwamanzi okanye zisinkcenkceshele kakhulu. Ngaloo mqondiso wokunakekelwa okwakhelwe ngaphakathi, inkwenkwezi ye-cactus yintlobo elula elula.
Ezi cacti, nangona zinokukhula zikhulu kakhulu, zinokugcinwa zincinci kwaye zithambe ngokuthena. Ngesi sizathu, kulula ukugcina olu hlobo lincinci okanye lukhulu njengoko ungathanda.
Unokuzama ukutyala amacandelo athenciweyo kwiimbiza zabo ezincinci zezityalo ezongezelelweyo ukubeka ngobuchule kufutshane nekhaya lakho okanye iofisi!
Uhlobo olulandelayo, iindlebe zekati malunga nokuhle njengoko zivakala; velvety, plush, and succulent, amagqabi eendlebe zekati ezindleleni esuka kwisityali ezantsi kumacala ayo ukuya kumphezulu ahleli kuwo.
Xa befuna i-trim, okanye babe semilenzeni kakhulu, susa ubude kwaye ubanamathele kanye emhlabeni ngaphambi kokuba unkcenkceshele ukuqinisekisa ukuba iingcambu ezintsha zikhula kwiziqwenga ezisikiweyo.
Emva kwalo lonke olu lwazi, usenokuba nemibuzo embalwa malunga nokukhula kweeparameter, zeziphi iintlobo ze-cacti zokuzama, kwaye ukuqala phi, nazi izifundo ezimbalwa onokufuna ukuzijonga. Amathuba kukuba, omnye wemibuzo yakho udweliswe apha ngezantsi!
Ngokwesiqhelo, kuxhomekeka apho ubekwe khona. I-Cacti eneemfuno zokukhanya okuphezulu kunye neqondo lobushushu, njenge-saguaro, isenokungangcono umntu ohlala kwindawo ebandayo, emnyama. Nangona kunjalo, ezinye ii-cacti azikhathali ngokukhanya okuphantsi kwezi ndawo, njengenyanga yecactus.
Jonga ngeemfuno zommandla kwaye ulinganise ukuba kukukhanya okungakanani okufumanayo ngaphakathi usebenzisa usetyenziso lwefowuni, emva koko ujonge kwisalathiso sedatha ukuze ubone ukuba ikhula phi.
Uya kufuna ukongeza ukuqaphela ukuqala nge-cacti elula ukuba ikhule. Ke xa sele ufumene ezimbalwa kwezi ntlobo, ungaya kwisebe ukuzama i-cacti enzima ngakumbi, njengendlovukazi yasebusuku, eyi-epiphytic kwaye ifuna iintlobo ezizodwa zezichumisi.
Enye yeentlobo zezona ndidi zangaphakathi ze-cactus ukuqala ukukhula yiChristmas cactus, eya kuthi ikhule phantse kuyo nantoni na!
Le mpendulo ixhomekeke ikakhulu kulowo ubuzayo. Abanye bathi i-barrel cacti ilula, ngelixa abantu abahlala kwiindawo ezinomswakama bathi i-epiphytic cacti kulula ukukhula. Kuxhomekeke apho uhlala khona, kukho iindlela ezimbalwa ezilula kakhulu.
Ukuba uhlala kwindawo ebandayo, emanzi eneentsuku ezimbalwa zokukhanya kwelanga kunye namaqondo obushushu asezantsi, zama ukuqala ngesiselo esimnandi esisezantsi, njenge-echeveria. Ngale ndlela, unokuchonga ngokuchanekileyo ukuba angakanani amanzi, ukukhanya, kunye nokufudumeza i-cactus yakho xa ifuna ukubola naxa ikhula.
Kwiindawo ezishushu, zama ukuqala ngento elula kwivenkile enkulu yebhokisi, njenge-cactus yenyanga okanye ipensile. Ezi zinto nazo kulula ukuzifunda, njengoko zibonisa iimpawu zoxinzelelo xa bengonwabanga. Funda ngakumbi malunga Izityalo zangaphakathi ezifana nokukhanya kwelanga Apha.
amagumbi okuhlala ekhitshini
Kukho ixesha elide nelifutshane ukuphendula lo mbuzo. Impendulo emfutshane nguewe, zonke izityalo ziyawucoca umoya, kodwa phantse akunakwenzeka ukubala kwizityalo ezizodwa ukwenza njalo.
Ixesha elide kukuba ngelixa izityalo zinceda ukungenisa umoya emoyeni, oku kusebenza kuphela kwiindawo ezincinci, ezincinci, ezinje ngebhokisi evaliweyo evaliweyo, kwaye isityalo siya kufuna ukuba sikhulu kakhulu.
Zonke iintlobo zecactus yangaphakathi kunye nee-succulents zihlambulula umoya kwaye zifunxe iibhaktheriya eziyingozi kwinqanaba elithile. Funda ngakumbi malunga izityalo zangaphakathi ezisusa ityhefu Apha.
Oko kuyathethwa, uninzi lweoksijini esemoyeni woMhlaba ayiveli kwizityalo, kodwa endaweni yeentsholongwane kwindalo esingqongileyo. Oku kwenzeka elwandle, emhlabeni, emahlathini nakwezinye iindawo.
Ukuba ubunokuthi, yithi, iitanki ezimbalwa zentlanzi, iikiti zokukhulisa amakhowa, kunye negumbi eligcwele izityalo, ezinokuthi zenze isifotho esincinci kumgangatho womoya wekhaya lakho. Ngokubanzi, izityalo ziphumle ngakumbi kunokuhlanjululwa, ke into yokuhlanjululwa ayisebenzi ngokufanelekileyo njengoko umntu ecinga.
Kuxhomekeka ekubeni unokukhanya okungakanani ekhayeni lakho, kunye nokuba loluphi uhlobo lokukhanya onakho. Uninzi lwe-cacti luya kukhetha indawo eqaqambe kakhulu enokukhanya kwendalo okuninzi okuvela kwii-engile ezininzi, kodwa iya kuhlala ifestile ngokutshintsha okungaguquguqukiyo kumaxesha ngamaxesha ukuthintela ukubambelela.
Ukuba unomnye umthombo wokukhanya, njengesibane esigcweleyo se-LED okanye ukukhanya okukhulayo, awusenamda kwiifestile kunye neendawo ezikhanyayo. Ukuba nje ushiya ukukhanya kwi-8 okanye ngaphezulu iiyure ngosuku kufutshane necactus, uya kuba nesityalo esonwabileyo, esisempilweni.
Zeziphi iintlobo ozithandayo zecactus yangaphakathi? Sazise kumagqabantshintshi ukuba sabelane ngeengcinga zakho. Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela iphepha lethu malunga Ezona ndidi zilungileyo zemithi yangaphakathi Apha.
Izitayile zokunxiba zomtshato ngobukhulu obukhulu
iingoma zomtshato zoonyana noomama
ikhitshi elimnyama leplanga
Isuti engwevu enezihlangu ezimdaka
ngexabiso eliphantsi kunye nobungakanani benkcaso yomtshakazi enemikhono